Konke odinga ukukwazi ngomlaza weTaurus | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezinkulungwane ze- izinkanyezi ubude nobubanzi esibhakabhakeni. Namuhla sizokhuluma ngomunye wezinkanyezi zezinkanyezi omelwe yinkabi noma yinkabi. Imayelana ne- i-taurus constellation. Le nkanyezi ibonakala kahle kakhulu esibhakabhakeni esigcwele izinkanyezi futhi isondele kakhulu ezinkanyezini zeScorpio neLeo. Kulesi sifunda lapho kutholakala khona le nkanyezi siphinde sithole amaqoqo ezinkanyezi amabili aziwa kakhulu.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngomlaza weTaurus.
1 Likuphi i-constellation Taurus?
3 Izinkanyezi eziyinhloko ze-constellation Taurus
4 Amaqoqo kanye ne-nebulae
5 Izinganekwane zeTaurus nokufundwa kwezinkanyezi
Likuphi i-constellation Taurus?
Uma sifuna ukuthola le nkanyezi esibhakabhakeni, kufanele siqale sifune i-constellation Aries. Le nkanyezi isentshonalanga kanti i-constellation iGemini ibisempumalanga. Uma sithola lezi zinkanyezi ezimbili, siyabona ukuthi phakathi kwesikhala esiphakathi kwenye nenye kukhona i-constellation Taurus.
Kanye nemilaza yeScorpio neLeo ingenye yezindala kunazo zonke ezaziwayo. KwabaseBabiloni kwakuyinkanyezi ebaluleke kakhulu kusukela lapho ilanga liwela umlaza i-Taurus baqala ukuqala ikhalenda labo. Ngaseningizimu yale nkanyezi singathola i-Orion nenyakatho yePerseus (isixhumanisi).
Le nkanyezi iwele i-galactic equator. Le galactic Ecuador yiyo ephethe ukuhlukanisa iMilky Way kabili. Ngakolunye uhlangothi, sine-equator yasezulwini futhi ngakolunye uhlangothi sine-elliptical. Lokhu noma kumelela umzila wezinkanyezi esibhakabhakeni.
Esinye sezici eziyinhloko zale nkanyezi ukuthi sitholakala ezigabeni ezimbili zezinkanyezi ezivulekile futhi siseduze kweplanethi yethu. La maqoqo amabili ezinkanyezi anamagama awo. AmaPleiade namaHiades. Singayibona le nkanyezi kalula ngokusebenzisa izibonakude noma isibonakude. Kwabaqalayo abaningi sincoma ama-telescopes ebanga Isibhakabhaka. Kulula ukuzibona njengoba zingabonakala kahle emkhathini.
Izinkanyezi eziyinhloko ze-constellation Taurus
Kuyinkanyezi enezinhlobonhlobo zezinkanyezi, amaqoqo kanye i-nebulae. Ukuba neqoqo lezinkanyezi elikhulu, kufanele sazi ukuthi singahlukanisa kanjani okuyizinto ezithandwa kakhulu. Sizokwenza uhlu lwalezo zinkanyezi ezaziwa kakhulu nezimpawu zazo eziyinhloko:
I-Aldebaran: Isici sayo esiyinhloko ukuthi iyinkanyezi ekhanya kakhulu kulo lonke iqoqo lezinkanyezi. Unombala phakathi kokubomvu nokusawolintshi okujule kakhulu. Lokhu kwenza kube lula ukubona. Imvamisa ihambisana nenye inkanyezi enokukhanya okuncane.
I-Alcione: iyinkanyezi ekhanya kunazo zonke esiqintini sePleiades. Kuzo zonke izinkanyezi eziqoqeni iyona encane kunazo zonke.
I-Tauri, izinkanyezi eziphindwe kabili: ithola leli gama ngoba lapho uthi nhlá bangabonakala sengathi bayizinkanyezi ezimbili ezisondelene kakhulu. Ngalesi sizathu, ibizwa nangokuthi izinkanyezi kanambambili futhi zimhlophe.
I-Tauri, inkanyezi yesitshalo yokulandelana okuvunguza: Ngaleli gama elide sikhuluma ngohlobo lwenkanyezi ye-spectral A esesigabeni sokuziphendukela kwemvelo. Le nkanyezi ivela ekuhlanganisweni kwe-hydrogen ibe yi-helium. Lokhu kusabela kwamakhemikhali kwenzeka ngendlela efanayo naselangeni.
Amaqoqo kanye ne-nebulae
Manje sizokhuluma ngamaqoqo nama-nebulae aqukethe le nkanyezi yeTaurus. Sishilo phambilini ukuthi inezinhlobo ezimbili zamaqoqo: iPleiades neHiades. IPleiades yiqembu lezinkanyezi eziyi-7 ezikule nkanyezi futhi ezisondele kakhulu eMhlabeni. Zibhekwa njengezinkanyezi ezibonakala kakhulu kuzo zonke izinkanyezi kule nkanyezi futhi zindala kakhulu. Udumo lwabo ludalwa ukuthi basabalalise umlando futhi baziwa kabanzi ngokuvela ezinganekwaneni nasezinganekwaneni eziningi.
AmaHiades elinye iqoqo lezinkanyezi elaziwayo nelidala kakhulu emkhathini. Kulinganiselwa ukuthi bacishe babe yizigidi ezingama-625 ubudala.
Ngokuqondene ne-nebulae, kukhona futhi ngaphakathi kwalesi siqoqwana. Owokuqala waziwa ngokuthi yi-Crab Nebula. Kuyi-nebula eyenziwe yilokho okusele okushiye i-supernova. Lokhu kutholakala kwenziwa ngenxa yezazi zezinkanyezi zase-Arab naseChina ngonyaka we-1.054. Maphakathi nale nebula singabona izinkanyezi ezimbili kodwa ngokukhanya okuncane. Ezifundweni ezenzelwe ukuqonda kangcono izici zale nebula, kutholakale ukuthi ikhipha imisebe enamandla kagesi kagesi.
Enye ye-nebulae ebizwa ngokuthi i-constellation yeTaurus ibizwa Ukucabanga Nebula. Isici sayo esikhulu ukuthi inombala oluhlaza okwesibhakabhaka nokwakheka kwamakhemikhali kagesi, i-iron, i-hydrogen, i-oxygen, i-silicon, i-carbon kanye nothuli lwezinkanyezi.
Izinganekwane zeTaurus nokufundwa kwezinkanyezi
Mayelana nemilaza esibhakabhakeni kunezinganekwane eziningi nezindaba. Ngokusho kwezinganekwane zamaGrikhi, iTaurus imele iminotaur. Le minotaur ayikho enye into ngaphandle kukaZeus oguqulwe waba yinkomo. Kwinganekwane kuthiwa uZeus uthandana kakhulu ne-Europa futhi unquma ukuziguqula abe yinkunzi enhle futhi emnene. U-Europa, embona, ugibela kuso futhi uZeus usizakala ngalesi simo ukuze akwazi ukumthumba futhi azike olwandle. Yilapho iphethe khona futhi bazala izingane ezi-3 ezibizwa ngamaMinos, Radamantis naseSarpedón.
Kusukela ngomzuzu lapho izinganekwane zisitshela ngobukhona balezi zingane, iMinos imele umlaza weTaurus. Ngakolunye uhlangothi, ezinganekwaneni zaseGibhithe le nkanyezi imelelwa njenge onkulunkulu u-Osiris no-Isis. Labo nkulunkulu babili bamelwe ngomzimba uhhafu wenkunzi uhhafu wenkomo.
Le nkanyezi eyesibili kuzodiac futhi umbusi wayo ngu iplanethi venus. Abantu abazalwa ngaphansi kophawu lweTaurus bazwela kakhulu. Kuthiwa bangabantu abangathenjwa ngokuphelele futhi imvamisa bangabangane nabathandi abahle kakhulu. Bangabantu ababekezelayo futhi babonakala ngokuba namandla ngokomzimba nangokwengqondo.
Njengoba ukwazi ukubona, i-constellation yeTaurus yaziwa kakhulu emhlabeni jikelele. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umlaza i-Taurus